Maka: iqhosha lokungenisa
Ingxelo ka-2014 yeNgxelo yokuGuqulwa: Ibhentshi kunye nokuPhucula ukuGuqulwa kweFom yakho
NgoLwesihlanu, ngoJuni 20, 2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 20, 2014 Douglas Karr
Sibe ngabahlobo kunye nabalandeli (kunye nabo sinxulumene nabo) kwiFomstack okoko kwaqala ukupapashwa. Kukho ubutyebi bolwazi kwinkampani kwaye bayaqhubeka nokukhathalela abathengi babo kwaye babavelisele iziphumo ezintle. Baye bakhupha nje iziphumo ezintle ngokumangalisayo ngelixa behlahlela kwaye behlalutya uguquko kubathengi abangaphezulu kwama-400,000 kunye nezigidi zabo zokungeniswa kweefom. Ngeenkcukacha ezipheleleyo, khuphela iNgxelo yokuGuqulwa kweFomu yeFormstack ka-2014. Ingxelo yingqokelela yeedatha